Kooxda ISIS (Daacish) Ee Soomaaliya oo loollan awoodeed oo gudahooda ah isku dilaya. | Raadgoob
Kooxda ISIS (Daacish) Ee Soomaaliya oo loollan awoodeed oo gudahooda ah isku dilaya.
Warar ay BBC ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyey in ku xigeenkii kooxda dawladda islaamiga (Daacish) ee Soomaaliya, Mahad Macallin, lagu khaarajiyey magaalada Muqdisho.
Image caption Hogaamiyaha Daacishta Soomaaliya, Sh. C/qaadir Muumin, ayaa la sheegayaa inuu xanuunsanayo